Nidaamka dhuumaha dhuumashada dhuumashada - qalabka mashiinka
Bogga ugu weyn / Nidaamka kuleylka hawo qaboojinta / Mashiinka dhuumaha kululeeyaha Induction
Category: Nidaamka kuleylka hawo qaboojinta Tags: kululeynta dhuumaha dhuumaha, dhuunta qubeyska induction induction, nidaamka difaaca ee induction, nidaamka kuleyliyaha dhuumaha, alxamida induction alxanka, alxanka hore, preheat daaweynta alxanka, nidaamka dhuumaha preheating, PWHT, Caawinta walaaca fekerka ee 'PWHT', Nidaamka PWHT, xasilinta walaaca
Taxanaha MYD ee hordhaca tuunbada Mashiinada tuubbooyinka waxaa loo isticmaalaa alxamidda, foorarsiga, tuubooyinka, daaha, ku habboon, kicinta walaaca, kuleylka pre-weld iyo daaweynta kuleylka ka-dambeedka.
Qaboojinta hawada: si fiican u shaqeynaya -10 ℃-40 ℃
Awoodda kuleylka kuleylka: Si aad ugu kululeyso shaqada shaqada buste dahaarka ku wareegsan. Xawaaraha kuleylka sareeya iyo kuleylka waxtarka leh tamar yar oo lumay.
Shaashadda taabashada PLC: Dareenka si aad u aragto oo sahlanaato inaad shaqeyso.
Coil induction-ka ah: Si fudud u dabaysha shaqada hawsha kala duwan.
Kala soocida furan ee furfuran: waxay fududahay in la shaqeeyo oo la dhaqaajiyo.
Diiwaanka Heerkulka: Diiwaangeli dhammaan qaybta kuleylka.
Xakamaynta Heerkulka: Kulaylinta sida ku cad faahfaahinta shuruudaha kululaynta ee leh dulqaadka ± 3 ℃.
Diyaarinta kuleylka: Diyaarinta dhejinta, qoorta, qalab, alaab, alxanka.
Daaweynta kuleylka dhoobada ee dambe: Tank, kuleyl ama shaqooyin kale oo biraha ah
Kuleylinta: Kuleylka kuleylka birta, Kuleylka kuleylka ah, sabuurada markabka, baakada zinc, qaybo waaweyn & kuwo aan caadi ahayn
Isku-dhejinta dhuumaha: Saliidaha dhuumaha, gaasta dhuumaha, biyaha dhuumaha, dhuumaha dhuxusha iyo qalabka kale ee dhuumaha
Muuqaalka Dijital ah iyo Isku hagaajinta xuduudaha, sida awooda wax soo saar iyo heerkulka dejinta.
Waxtarka sare: Awoodda korontada waxaa si toos ah loogu beddelaa tamarta kuleylka oo leh hoos u dhac xoogan.
Failure Fashilka: Marka hawlgalka dhaco, dhawaaq digniin ah ayaa la furfuray iyo sanduuqa khaladaadka ee lagu muujiyay shaashadda PLC.
Naqshad Dhaqdhaqaaq-dhexdhexaad ah: Nidaamku waa mid deggan oo kharashkuna yar yahay dayactirka.
Diiwaanka Dijital ah oo leh daabacad ikhtiyaari ah ayaa awood u leh inuu qoro xogta heerkulka iyo abuurista isbeddelada jaantuska ee horumarka kuleylka.
Cabbiraad sax ah ee heerkulka: Meelo badan oo lagu ogaado heerkulka; 6 channels for xakamaynta heerkulka oo leh dulqaad 3 ° C; Kuleylka kuleylka.
Air Cool System ayaa u oggolaanaya nidaam ka shaqeynaya xaalad adag: -30 º C ~ 50º C
IGBT Module: Waxaan u qabannaa Tiknoolajiyadda casriga ah ee IGBT.
Xakamaynta Smart: Dhamaan hawlgalku waa yaryar oo lagu xakameynayo shaashadda PLC.
Si fudud loo rakibo: Isku-duubid degdeg ah.
Si sahlan loo dhaqaajiyo: Iyada oo la marayo Nidaamka Korontada ama Nidaamka Dabka.
Badbaadin: Nidaamka Badbaadinta ee Awoodda Awoodda.
Xiriiriyaha Universal: Biyaha aan caddayn; Nalalka.
Joogtaynta Output 2KHZ ~ 36KHz
Miisaanka 130KG 136 kg 140 kg 145 kg 168 kg 180 kg
size 800 * * 560 1350mm
Size xirxirida 900 * * 660 1560mm
Keydinta Tamarta: 30-80%
xirmidda weldiyaha weld